Tattoo-ga qabyaaladda: maxay yihiin, noocyo noocee ah ayaa jira iyo fikrado | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah sawirada 'tattoos' oo aan ka bixin qaabka, oo leh taageerayaal aad iyo aad u badan, waa tattoos qabiil. Kuwani waa jinsi la'aan, taasoo macnaheedu yahay inay isticmaali karaan ragga iyo dumarkaba.
Waagii hore, waxaa loo isticmaali jiray in lagu kala sooco qabiilooyinka kala duwan ee dhulka ku badan, laakiin maanta wali waxay u yihiin waxyaabo badan oo qurxin ah oo ay ku xiraan maqaarkooda. Haddii aad ka fikireyso inaad sameysato tattoos qabyaaladeed, waxaad timid meel wanaagsan, sababtoo ah kaliya kuma siin doonno fikradaha tattoo, laakiin sidoo kale waxaan rabnaa inaad ogaato halka ay ka yimaadeen iyo macnaha ay yeelan karaan oo ku xiran nooca aad doorato
1 Taariikhda taatikada qabyaaladda
2 Macnaha taatikada qabiilka
2.1 Tattoo-dhaqameedka dhaqanka
2.1.1 Tattoo-ga qabiilka ee qabiilooyinka Maori
2.1.2 Astaamaha Haida
2.1.3 Dayak tattoos
2.1.4 Tattoo-ka Polynesia
2.1.5 Tattoo qadiimiga ah
2.2 Tattoo casri ah
3 Tusaalooyinka tatooyada
Taariikhda taatikada qabyaaladda
Sidaad ogtahay, shaatiga laftoodu maahan wax ugub ah. Muddo dheer ayey nala joogeen, laakiin waa tan iyo waagii nolosha aadanaha ee adduunka ay jireen, in kasta oo ay sida caadiga ah ka dhigteen "mid aan sii waarin", iyagoo isticmaalaya dhiig ama walxo kale si ay u qurxiyaan maqaarkooda.
ka Naqshadaha qabyaaladu waxay bilaabeen inay kasoo muuqdaan qabiilooyinkii hore. Xaqiiqdii, waa la ogyahay in tixraacyada ugu horreeya iyaga laga helo qabaa'illada Celtic, Borneo, Maori, Polynesia ... tan dambe xitaa way ka muhiimsan tahay maxaa yeelay ma garan kartid laakiin, ereyga tattoo, ama tattoo, ayaa timaadda laga soo bilaabo ereyga Polynesian-ka "tatau", waana kii ay dhihi jireen "calaamadee" ama "ku dhufo".
Ujeeddada ay dadku u calaamadeeyeen maqaarkoodu ma ahayn inay ku raaxaystaan ​​ama ku qurxiyaan jirkooda, dhab ahaantii, astaantani waxay lahayd ujeedo, sida in lagu aqoonsado xubnaha hal qabiil ama mid kale. Intaas waxaa sii dheer, marka loo eego noocyada tattoosyada qabiilka, kuwani waxay go'aamin karaan xaalad bulsho oo gaar ah, ama guulo ay gaareen dadkaasi. Waxay sidoo kale la xiriirtay ilaalinta, ama inay ku dhex milmaan deegaanka markii la ugaarsanayo, ama sababo la xiriira khuraafaad, taasoo ka dhigtay qof kasta oo astaantaas astaan ​​u ah inuu dareemayo badbaadin.
Waqtiga xaadirka ah, Tattoo-ga qabyaaladda ayaa is beddelay, oo waxaad ka heli kartaa laba kooxood oo waaweyn: "asalka" qabyaaladda, iyo tatooyo casri ah. Maxay ku kala duwan yihiin? In ku filan, laakiin waxaan inbadan kala hadli doonaa iyaga xagga hoose.
Macnaha taatikada qabiilka
Sidaad horeyba u ogaatay, shaatiga qabiilka maahan wax casri ah, waa kumanaan sano jir, kuwa dhaqanka ahna, waxay lahaayeen macnayaal, hada, luntay. Si kastaba ha noqotee, waxaan isku dayi doonaa inaan wax yar cadeyno.
Aan ku bilaabo, oo sidii aan hore u soo sheegnayba, waxaa jira laba koox oo waawayn oo ku dhex jira tattoos qabiil: mid dhaqameed iyo mid casri ah. Runtu waxay tahay in mid iyo tan kale ay isku mid yihiin sida biyaha iyo saliidda; ama sida habeen iyo maalin. Muuqaal ahaan, waxaad jeclaan kartaa kuwa casriga ah inbadan, laakiin kuwani ma lahan macno weyn oo kuwa kale yeeleen. Ma rabtaa inaad labadaba ogaato? Waa hagaag aan u nimaadno.
Tattoo-dhaqameedka dhaqameed waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee jira. Dhab ahaan, qaabku wuxuu leeyahay siyaabo aan xad lahayn oo loo raad raaco, iyada oo aan la raacin xaqiiqda ah in ay isku dhafan tahay, ama ay tahay in ay raacdo amar. Arrintuna waxay tahay kuwii u isticmaali jiray waagii hore, ha fiicnaadeen ama ha qaldameen; iyaga ayaaba u adeegay in lala xiriiriyo nooc ka mid ah qabiilka ama mid kale, oo ah astaan ​​lagu garto.
Tattoo-ga qabiilka ee qabiilooyinka Maori
Sidii aan ka faallaynay, qabiiladani waa tixraacyadii ugu horreeyay ee laga haysto taatikada qabiilka. Waxay ka soo muuqdeen New Zealand waxaana lagu gartaa iyagoo wajiyada, gacmaha iyo lugaha la sawiray. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo wajiga, waxay ugu yeereen "moko", mid walbana wuxuu lahaa sawir u gaar ah, oo la xiriira xaaladdooda bulsho iyo shaqadooda, guulaha shaqsiyeed ee ay gaareen, iwm. Marka laga hadlayo dumarka, tattooskan waxaa lagu sameeyay kaliya afka iyo garka (ragga waxay ku dabooli kartaa wajiga oo dhan).
Qabiilka Haida wuxuu ka yimid Ameerika, waxayna caan ku ahaayeen astaamaha ay gashadaan gaar ahaan kan gacmaha, laabta, garbaha iyo dhabarka. Tattoo noocee ah ayay ahaayeen? Waa hagaag xoolaha. Xaqiiqdii, waxa ugu badan ee la arki karay waxay ahaayeen bears, beavers, kalluun, iwm.
Dayak wuxuu ku yaal jasiiradda Borneo, ee Aasiya. Xaaladdan oo kale, sawir gacmeedka, oo ay isticmaali jireen ragga iyo dumarku, ayaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka xidhan. Sidaa darteed, Naqshaduhu waxay la socdeen ubaxyo, dawacooyin, eeyo ... Iyo, si ka duwan kuwii hore, halkan waxay ku isticmaaleen midabyo (had iyo jeer maahan laakiin marar badan).
Marka laga hadlayo Polynesia, sawir gacmeedku wuxuu astaan ​​u ahaa dadka degan jasiiradda, halkaas oo ay ku dhameysteen: gacmaha, lugaha, naasaha, garbaha ... Iyaga waxay u ahayd waddo ay ku metelaan taariikhdooda, iyo sheeg cidda ay ahaayeen, qoyska ay ka tirsanaayeen, xaaladdooda, waxay aaminsan yihiin, guulaha ay gaareen ...
Tattoo qadiimiga ah
Waxaan ku dhammeyneynaa tattooska qabiilooyinka Celtic. Kuwaas waxaa la ogsoon yahay inay ku noolaayeen inta badan Irland, France iyo England oo la waayey qiyaastii sanadka 1000. Hase yeeshe, tatuuftoodii ayaa weli ah.
Oo sidey ahaayeen? Hagaag, waxaan kahadleynaa tattoos lahaa qaabab xayawaan ah, gaar ahaan shimbiraha, eeyaha, ama xitaa aadanaha. Kuwani way isku dhafanaayeen midba midka kale, marka lagu daro inay ku jiraan qaab wareeg ah.
Tattoo casri ah
Hadda aan ka hadalno kuwa casriga ah. Waxaa loogu yeeraa "qabyaaladda cusub" runtuna waxay tahay inaysan shaqo badan ku laheen kuwii hore ee aan ka soo hadalnay. Xaaladdan oo kale, waxa muhiimka ah maahan shaqooyin badan oo ay lahaayeen astaamaha kale, laakiin waa mid bilicsanaanta leh. Waxaa loo sameeyaa hal dhinac ama mid kale si ay ugu muuqdaan kuwo fiican, laakiin wax kale ma jiraan.
Waa runtaa nashqaddu waxay isku deyeysaa inay isu soo dhowaato qabiilooyinkii hore, laakiin ma horseedayso in lagu guuleysto, maadaama ay aad u qurxan yihiin oo xitaa ay ku jiraan sawirro ama naqshado casri ah oo, waqtiyadii hore, aan u istaagin inay ka fikiraan ama ay sidaas ku sameeyaan. Maskaxda ku hay in dadkii hore ay adeegsan jireen aalado aan fiicnayn, sida irbad dalool leh oo ay ka sameeyeen xayawaanka xayawaankiisa, lafahooda, bamboo ... oo ay ku buuxiyeen khad madow si hadhow loogu calaamadiyo jidhka qofka kale.
Hadda, Tattoo-ga qabyaaladda sidoo kale wuxuu yeelan karaa midab, gaar ahaan casaan ama jaalle. Intaa waxaa dheer, waxay ku saleysan yihiin xariiqyo qaro weyn oo lagu carfiyey kuwa aad u fiican, ama faahfaahin aan macquul aheyn in lagu arko astaamaha asalka ah.
Xitaa iyadoo sidaas ah, macnaheedu maahan inaysan qurux badnayn, iyo in, ayaga laf ahaantooda, ay macno u yeelan karaan qofka xiran.
Ugu dambeyntii, oo sidee baan ku ogaan karnaa waxaad jeceshahay inaad aragto fikradaha tattoo-ga, waxaan sameynay iskudubarid sawiro ah halka kuwaan lagu muujiyay. Waxaad wada leedihiin mid dhaqameed iyo midda ugu casrisan. Haddii aad doorato hal nooc ama mid kale adiga ayey kugu habboon tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tattoo qabyaaladeed